နီပေါ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > နီပေါ
Dwarikas Hotel in Kathmandu Nepal is everything you would want to find in an hotel. It has the architecture of an ancient building, yet this isaboutique style hotel with all the facilities and none of the drawbacks of an international style hotel. The architects who designed Dwarikas can be very proud of their efforts in creatingaunique atmosphere and yet such luxury in absolutely stunning surroundings. Kathmandu is such an evocative city, and Dwarikas Hotel blends in ...
The article describes the necessary steps that must be applied before starting any journey.
Have you ever marveled that how fascinating it would be to explore and experience mesmerizing gifts of nature in the manner you had always desired? For instance many of us havealatent craving to feel the rude and unsympathetic rocks by trekking over them,
တရုတ်နိုင်ငံ, တစ်ဦးဧရိယာနှင့်အတူ 9.6 သန်းစတုရန်းကီလိုမီတာ, ကမ်ဘာပျေါတှငျတတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, လာမယ့်သာရုရှားနိုင်ငံနှင့်ကနေဒါမှ.
ယင်း၏ညားဟိမဝန္တာတောင်တန်းများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ, နီပေါစွန့်စားခရီးသွားများအတွက်တစ်အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. နှစ်စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောနီပေါ၏ကအရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့နိုင်ငံအတွင်းရှိရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းဖို့တသက်တာ၏အတှေ့အကွုံမြားအပျေါမှာစတင်. ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်မယ့် ....
ရေခြားမြေခြားစွန့်စားမှုခရီးသွားစဉ်းစား? ဒါကြောင့်ရေခြားမြေခြားစွန့်စားမှုခရီးသွားမှကြွလာသောအခါသငျသှားဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများသို့မဆိုအတွေးထားကြပြီ? နီပေါအပေါင်းတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးသောအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်, သင်ဤမှော်တိုင်းပြည်သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသင်သည်သင်၏အိမ်တံခါးမှာညာဘက်ရှိအကောင်းဆုံး Adventures ရပါလိမ့်မယ်. ဒီယခုသေးထို့နောက်သွားရောက်ဖြစ်နိုင်သောနေရာများသင့်ရဲ့စာရငျးတှငျမပါလျှင်အဲဒီမှာပေါ်မှာထားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်နီပေါတွင်သာရေခြားမြေခြားစွန့်စားမှုခရီးသွားသငျသညျအခွင့်အလမ်းများကိုဤမျိုးကိုငါပေးမည်! အင်း...
The Siberian Express across Russia to Moscow has been described as the best train ride in the world. Maybe not anymore. The Tibetan Railway from Qinghai to Lhasa has thrown its hat in the ring. It will eventually be extended to the Nepalese border, only an hour's drive from Kathmandu. Some things you might want to think about before boarding: စျေးနှုန်း: Tibetan Railway tickets are CHEAP, ranging from US$49 to $180 depending on how much comfort you require and where youre c...
ပွငျခရီးသွားလာ: သတိပြု U.S. ခရီးသွားသတိပေးခကျြမြား
Traveling abroad presents certain risks for Americans, especially in light of the recent bombings in London, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ. For the most part, terrorists are the problem, although drug, gang, and other criminal activities can also beafactor. ကျေးဇူးတင်စရာ, အမေရိကန်. State Department regularly issues and updates Consular Information Sheets for every country in the world. These sheets give valuable information to travelers, information you must know before you take your trip.
အဆိုပါနိုင်ငံခြားနှင့်ဓနသဟာယရုံးအတော်လေးမှန်မှန်ခရီးမဖြစ်သင့်ကြောင်းနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာတက်ဆွဲယူ, နှင့်နေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်း, နှင့်အခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလာအာမခံပေးသူ, underwriters အာမခံပေးသင့်ပါတယ်သွားလာရသောနိုင်ငံများဆုံးဖြတ်. ကျနော်တို့အစိုးရခရီးသွားအကြံပေးချက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ခရီးသွားများအတွက်မှအာမခံပေးနိုငျဖြစ်စေမကြောင်းအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလာအာမခံမဖြစ်သော်လည်း, ၎င်း၏ဇာတိအားဖြင့်, ကမ္ဘာ၏အများစုကိုဖုံးလွှမ်း,...
အဆိုပါထိပ်တန်း3Bad Vacation Destinations
Javea ခုနှစ်တွင်နေစဉ် – စပိန်
Las Vegas မှအနက်ရင်ခုန်စရာ Glamour
Weathervanes- သမိုင်းဝင် weathervane ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာပါ!
ထိပ်တန်း 10 Things To Do In Paris